Maalinta AIDS-ka Adduunka oo Muqdisho laga xusay | KEYDMEDIA ONLINE
Maalinta AIDS-ka Adduunka oo Muqdisho laga xusay
Gudaha Muqdisho ayaa maanta laga xusay maalinta caalamiga ah ee xanuunka AIDS-ka adduunka, waxana halka lagu xusay joogay Soomaali xanuunka la nool .
MUQDISHO, Soomaaliya - Munaasabad kooban oo ka dhacday Caasimadda, ayaa waxaa kasoo qeyb galay, dhaqaatiir, xubno ka tirsan wasaarada caafimaadka iyo bukaano la nool xanuunka.
Xubnihii madasha isugu yimid ayaa ka dhawaajiyey in weli gudaha Soomaaliya uu taagan yahay takoorka lagu hayo dadka xanuunka HIV-AIDS la nool, taasoo ka dhalatay sida ay sheegeen wacyi galinta oo yar.
Munaasabada ayaa laga sheegay in dadka ugu badan ee xanuunku asiibayo ay u dhaxeeyaan da' ahaan 30 ilaa 50, iyadoo bukaanada daawooyinka ka qaata xarrumaha caafimaadkana ay tiradoodi tahay ilaa 500 (shan boqol) oo ruux.
Dadka xanuunka la nool qaarkood oo goobta ka hadlay ayaa tilmaamay, wal walka ay ku qabaan la macaamilka bulshada, waxana qeybtood ay xuseen in ehelkooda ay deyriyeen, sababo la xiriira xanuunka soo wajahay, taasoo ah arrin bani'aadminimada ka baxsan, maadaama caafimaafka iyo xanuunkaba uu weyne hayo.
Dhaqaatiirta ayaa iyaguna bukaanada ku booriyey, in ay joogteeyaan qaadashada daawada kaalmaatiga ah, si aanu isku dhimin awoodda jirkooda, iyagoo bulshadana ugu baaqay in ay mar walba iska baaraan xanuunkan, oo iminka kiisaskiisa ay soo kordhayaan.
Kowda December ayaa sanad waliba dunida laga xusaa, maalinta caalamiga ah ee Cudurka AIDS-ka, iyadoo maantoo kalana laga hadlo dhiibaatooyinka uu xanuunkan ku hayo malaayiinka dadyow ee dunida ku nool, wallow kuwa Soomaaliya jooga ay ugu darran yihiin sababo ku aaddan takoorka joogtada ah ee ay la kulmayaan.